CNC Service leexinta - Anebon Birta Products Co., Ltd.
CNC axdi qarameedka Qaybo
CNC Qaybo ka leexinta
Waa maxay CNC leexdo?
CNC lathe waa aalad mashiinka-sax sare,-oolnimada sare iswada. Qalabaysan munaarad multi-station ama awood munaarad, qalab mishiinka uu leeyahay tiro balaadhan oo ah technology processing, waxay ka arrinsashada kartaa dhululubada toosan, dhululubada dadab, labada cirif iyo workpieces kala duwan oo adag sida threads iyo grooves, la interpolation toosan iyo interpolation wareeg ah.
In ka leexdo iyo CNC, Qataarradii wax lagu qabtaa Chuck iyo wareejiyo, iyo qalab la quudin jiray at xaglo kala duwan, iyo qaababka badan oo qalab loo isticmaali karaa si ay u abuuraan qaabka la doonayo. Marka xarunta ayaa soo jeestay oo hawlaha axdi qarameedka, waad joojin kartaa wareeg ah in ay u oggolaadaan axdi qarameedka of qaabab kale. Technology Tani waxay u ogolaaneysaa for kala duwan ee muuqaalo, cabbiro iyo qalab noocyo.
The qalabka of lathe iyo leexashada xarunta CNC yihiin dhajinta on munaarad ka. Waxaan u isticmaali xakamaysada CNC leh "-waqtiga dhabta ah" qalab (tusaale Service Pioneer), kaas oo sidoo kale istaago wareeg ah oo ku darayaa hawlaha kale sida qodista, grooves iyo meelaha axdi qarameedka.
Haddii aad u baahan tahay meel leexashadii CNC, annagu waxaan nahay mid ka mid ah soo saarayaasha ugu awood iyo tartan jaban. Iyadoo 14 nooc oo lathes si toos ah sare, kooxda soo saari kartaa alaabta si sax ah oo ku saabsan time. kala duwan ee awoodaha soo saarka ogolaanaya Anebon in ay bixiyaan qaybo muunad gaar ah. Our qalabka wax soo saarka mass ay hubisaa in our dabacsanaan iyo kalsooni. Oo waxaan la kulmi doonaa baahida warshadaha kasta oo aannu u adeegnaa heerarka filan adag. Waxaan diiradda on tayada iyo adeegga macaamiisha.
CNC jeestay qaybaha aan sameeyo
Waxaan soo saarnay tiro balaadhan oo ah CNC qaybo ka jeestay in 10 sano iyo kooxda injineernimada our ayaa had iyo jeer la siiyaa dadka macaamiisha noo ah xal waxtar leh si ay u xalliyaan masalooyin ay ku soo saarka CNC qaybo ka jeestay. Waxaan hubiyo machining tayo leh si joogto ah sare, xitaa in ay dhacdo qaybo adag, iyadoo la isticmaalayo mashiinka modules adag oo isticmaalaya a lathe xirfad CNC ay ku shaqeeyaan mishiinka. Maxaa yeelay, Anebon had iyo jeer ku wareegsan sax sare!
FURSADAHA MACHINING markuu CNC
Iyada oo aynu qalab waxqabadka ugu dambeeyay oo sare oo ka kooban xarumaha leexdo CNC iyo 4-dhidibka mashiinada jeestay . Waxaan bixisaa noocyo kala duwan oo fursado wax soo saarka. Haddii fudud ama adag jeestay qaybo, muddo dheer ama gaaban qaybo ka mid sax jeestay, si wanaagsan ayaan u qalabaysan, waayo, dhammaan heerarka adag.
machining noocooda / saarka eber taxane
wax soo saarka-Dufcaddii yar yar
Production tirada Dufcaddii dhexdhexaad ah
Kuwa soo socda qalab adag caadi ahaan loo isticmaalo, aluminium, bir, copper, nylon, birta, acetal, polycarbonate, looxa, naxaas ah, PTFE, titanium, ABS, PVC, naxaas ah iwm
Customer From Germany Booqo The Company F ...
Anebon Hardware Co., Ltd. ISO900 helay ...
Sax Oo Xoog Machine CNC
Factory Deegaanka ee Anebon
aluminium kabka dhinta, zinc qaybo shubay dhinta, qaybo ka ridaya , dhiman ridaya qaybo , aluminium shubay, dhinta aluminium qaybo loo shubay ,